Taariikhda - FME World Tour Barcelona - Geofumadas
Juunyo, 2019 Geospatial - GIS, tabo cusub
Waxaan dhowaan ka qaybgalay munaasabadda FME World Tour 2019, oo ay hoggaamisay Con Terra. Munaasabaddan ayaa lagu qabtay seddex goob oo ku yaalla Spain (Bilbao, Barcelona iyo Madrid), waxay muujisay horumarka ay bixiso barnaamijka FME, Ciyaarta Isbedelka la leh FME.
Socdaalkan, wakiillada Con Terra iyo FME, waxay muujiyeen sida koritaankoodu ugu saleysnaa shuruudaha iyo codsiyada isticmaalayaasha mid kasta oo ka mid ah wax soo saarkooda, sida FME Desktop, FME Server, iyo FME Cloud. Intaa waxaa sii dheer, waxaa la soo bandhigay hay'ado dowladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay kuwaasoo muujiyay sheekooyinkooda guusha, iyagoo ilaalinaya xulafada Con-Terra iyo isticmaalka joogtada ah ee FME.
Kulanku wuxuu bilawday ciyaarta si uu barafka uga jiido kuwa ka soo qaybgalay, iyadoo la adeegsanayo telefoonka gacanta, su'aalo xiriir la leh isbedelka FME ayaa lagu jawaabay, abaalmarinnana waxaa loo siiyey kuwa si sax ah oo dhakhso ah u jawaabay. Ka dib, dibad-baxyada casriga cusub ayaa bilaabmay.
Waxaan sameeyey dhacdadan in Bilbao, Barcelona, ​​waxaana haatan Madrid, waxaan ku la dhacay qaab ciyaareedka iyadoo tirada dadka kuwaas oo u yimid in ay ka qayb dhacdo maxaa yeelay guud ahaan kuwa soo galaa waa dadka isticmaala oo doonaya in ay bartaan oo ku saabsan tabo cusub ku keenta baaraha iyo sida loo codsado mashaariicdaada Aad ayaan ugu faraxsannahay soo dhaweynta aan helnay. " Laura Giuffrida - Iyadoo terra GmbH
Waxa ay u muuqataa mid aad u cajiib ah in software ah in ay qaban karaan geedi socodka si loo yareeyo culeyska qalab badan oo ay ku jirto codsi GIS ah, weli ma sidaas la aqoonsan yahay - gaar ahaan-South America halkaas oo tirada dadka isticmaalaya ficil ahaan waa eber, iyadoo dalal dhowr ah marka la barbar dhigo laga bilaabo Yurub iyo Waqooyiga Ameerika (Mareykanka ama Kanada). FME Desktop Software, waxaa si wacan loogu yaqaanaa in uu leeyahay interface fudud iyo qalabyo bixiya khibrad aad u fiican.
Si aad u hesho in uu, waxaan bilaabi isagoo sheegay in taageerada iyo ka baaraandega noocyo badan oo qaabab xogta laga qaab (.shp), CAD (.dxf, .dwg), qaabab aan ollogga sida xogta, ama xogta Qaabaynta 3D sida BIM. Marka, maxaa dhisa FME, waxay nadiifin kartaa dhammaan noocyada qaladka ama duruufaha marka ay soo galaan GIS waxay abuuri karaan dhibaatooyin daran. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu cad - oo waxaynu og nahay in khubaro badan oo soo maray SIG this- waa qalad topology, baaraha nadiifiyaa oo dhan qaladaad sida si ay u galaan in ArcGIS ama GIS kale, PC ma burburto la qaylodhaan.
Marka laga reebo nadiifinta, FME waxay bedeli kartaa nooca macluumaadka, iyo weliba mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira faylka-magac kasta, ku dar, ka saarto sifooyinka, beeraha. Tani waa suurto gal ah iyadoo la isticmaalayo in ka badan 450 gudbiyeyaasha, loogu talagalay kasta baahida gaarka ah, kaas oo lagu dadka kale iyada oo loo marayo baaraha Hub barbar dhigi karaa., Waxa kale oo la falanqeeyey qaybaha cusub sida baakadaha iyo mashaariicda.
Bandhigayaashu waxay xooga saareen in lagu soo daro qalab taxane ah iyo waxqabadyo, tusaale ahaan, bedeleyaal la xidhiidha farsamada raajada ayaa lagu daray barnaamijka, sida: RasterObjectDetector, RasterObjectDetectorTrainer, iyo NatureLanguageProcessor, iyo sidoo kale badalayaasha cusub waxay diiradda saaraan barashada mashiinka.
Faa'iidada FME waa in ay taageerto gelitaanka iyo maareynta xogo badan oo kala duwan, taas oo aad ku xalin karto dhammaan noocyada xaaladaha la xiriira. Laura Giuffrida - Iyadoo terra GmbH
Waayo, hadda iyo hore ee isticmaala of baaraha, xusa ammaan ah in software ah ayaa isku dhafan function decompression ah, si kastaba ha ahaatee, in this version cusub oo aad ku dari kartaa xogta Tifaftirayaasha iyo nidaamka ayaa akhrin doono, oo aan marka hore iyaga soo saarida in desktop-ka, wax aad u faa'iido leh, maadaama dhammaan codsiyada iyo softwareejintu ay aqbalaan faylasha la fureen, taas oo tarjumaysa wakhtiga kaydka ah dhamaystirka hawlaha.
FME ma aha qalab wax lagu soo saaro, waa software ah oo ku yaal gadaasha GIS ama nidaamyada kale, xooggiisu wuxuu ku jiraa habka, nadiifinta xogta iyada oo loo marayo isticmaalka beddelayaasha. Ugu dambeyntii, ka dib markaad sameysid waxa loo baahan yahay, waxaad dib u qortaa qaabka aad u baahan tahay. Laura Giuffrida - Iyadoo terra GmbH
Inta badan dadka ka qaybgalaya munaasabadaha la xiriira FME, waa kuwa haysta waqti ay adeegsanayaan barnaamijka FME oo ah mashaariic ay ka mid yihiin mashaariicda (shirkadaha ama dawladaha), labadaba gudaha iyo dalka. Sannadkan, kaalmadu way yarayd, waxay ahayd caddayn in ay jireen dad qolka ah oo aan marnaba isticmaalin arjiga oo ay ka qaybqaateen si ay u ogaadaan faa'idooyinkooda, oo lagu daray plus Ter Terra iyo FME.
Si loo qabto dadka ka soo qaybgalay, waxay bilaabeen inay muujiyaan dhammaan qalabka cusub iyo qalabkooda cusub. Waxay ku bilaabantay interface, waxaa suurtagal ah in la beddelo habka mugdiga ah, mid ka mid ah shuruudaha ay sameeyeen dadka isticmaala, iyo sidoo kale horumarinta qoraallada, midabada sida waafaqsan xogta, daaqadaha la diyaarin karo si loogu habboonaado isticmaalaha.
Waxa uu sidoo kale ka hadlay qaabab lagu daray DICOM (images of mashiinada ku jira jidhka bini'aadamka), TopoJSON (la xiriir topological), musqulaha, soo saarista iyo akhriska qalabka GPS (Garmin POI), helitaanka API ee Socrata iyo xireyaasha cusub ee qeyb ka noqon doona Hubka Hub, sida: AzureBlobStorageConnector, S3Connector, ama CityworksConnector.
FME wuxuu akhriyaa oo qoraa faylasha ESRI i3s
Sidoo kale, waxaan ku dari shaqeynta la xiriira raster waxbarashada Multitemporal meesha images waxaa lagu dhejiyay -arrastrándolas folder ka il iyo in nidaamka u qabata scan muujinaya kala duwanaanta, guud ahaan animation ah loo soo afjaro oo dhan images soo xulay. Cusbooneysiin kale oo sax ah waa midka la xiriira ChangeDetector -hore UpdateDetector-, loo isticmaalo si loo go'aamiyo isbeddelada ka dhexeeya hal ururinta xogta iyo mid kale, hadda waa suurtogal in la go'aamiyo xogta dulqaadka ee xogta. Intaa waxaa dheer, suurtogalnimada abuurista qiyamka caadiga ah ayaa lagu daray si loo isticmaalo, oo u baahan user-ka loo yaqaan "transformer" dhowr jeer, uma baahna in uu hawsha oo dhan bilowdo bilawga, oo la dhigo xuduudaha mar kasta.
Isbeddellada aan la xiriira oo kaliya in ay baaraha Desktop, laakiin sidoo kale xubno kale sida baaraha Server, kaas oo xubno ka ah sida ku daray: gasho calaamadihii maamulka mashruuca shaandhaynta, kala iibsiga mashaariic Server baaraha in Hub baaraha ah, isagoo intaa ku daray ee xeerarka amniga lambarka, iyo doorbidinta qaabka isticmaalka.
Intaa waxaa dheer, waxay ku hadlay oo ku saabsan hagaajinta mid ka mid ah waxyaabaha ugu filayo, EsriReprojector, oo markii hore loo baahan yahay user u leedahay liisanka ESRI-ArcGIS hadda update this ma isticmaali ArcObjects ama u baahan yihiin in ka badan liisanka baaraha.
Haddii aan ka hadalno sheekooyinka guusha, waxaa jiray hay'ado dhowr ah oo isugu soo uruuray si ay u muujiyaan faa'iidooyinka isticmaalka FME, mashaariicda sida Daabacaadda iyo faafinta Khariidadda Muuqaalka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Barcelona ee Institut Municipal d'Informàtica Ajuntament de Barcelona, ​​Nexus Geographics ayaa sidoo kale goob joog ka ahayd oo tilmaamaysa sida ay u hirgeliyeen adeegyada kala soo degsiga firfircoon iyo otomatiga maaraynta metadata ee IDE iyadoo la adeegsanayo Adeegga FME .
Waxaan hubnaa in aad la yaabantahay, haddii baaraha caafimaad u baahan iibka ee liisanka Well haa!, Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah falanqeeyayaasha iyo dadka isticmaala ayaa sheegay in aan helaan kharashka weyn, laakiin maalgelinta muddo dheer, dhammaan faa'idoyinka jiilka mashaariicda noocyada kala duwan iyo dhammaan noocyada kala duwan. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan badeecooyinka Software Safe, kuwa horumariya FME, waa inaad kaliya tagtaa shabakadooda, ama blog halkaasoo ay bulshadu muujiso walaacdeeda, waxay ka jawaabtaa sida hababka loo fuliyo, iyo sharaxaadda dhammaan badalayaasha iyo qalabka.
Post Previous" Hore Maxaa ku cusub cilmiga-injineernimada - AutoDesk, Bentley iyo Esri
Post Next Kanbanflow - codsi wanaagsan oo lagu xakameeyo howlaha sugayaNext »